Ngaba i-USPS ihambisa ngeempelaveki? Jonga iintlobo zeenkonzo zokuhanjiswa
By IVictoria Akpan TMLT Septemba 20, 2021 ishishini 0 Comments
Ngaba i-USPS ihambisa ngeempelaveki-
Ukuthumela iipasile ngenkonzo yeposi iseyeyona ndlela inokwenzeka, ifuna isidingo sokubeka phambili iishedyuli zokuhanjiswa ukulungiselela abathengi. Kwaye ukuba usebenzisa i-USPS, ungathanda ukuba bazise ngeempelaveki.
Nangona kunjalo, oku kuphakamisa umbuzo obalulekileyo: ngaba USPS ukuhambisa ngeCawe, ngeMigqibelo, okanye ngeempelaveki?
Kufuneka wenze ntoni ukuba awuyifumani iodolo yakho yeAmazon
Ubungakanani beKhadi leposi kunye nobukhulu
Iinkonzo zesitampu kunye neposi naphakade
Ngaphambi kokuphendula umbuzo: Ngaba i-USPS iyahambisa ngeempelaveki? Nceda qaphela. USPS sisifinyezo.
Imele i-United States Postal Service. Kwakhona, i-USPS njengoko isaziwa kakhulu ibisoloko ikho ukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo kubo bonke abemi baseMelika kwaye ibenze ubomi babo bube lula ngakumbi kwaye bube lula.
Inkonzo yeposi yaseMelika (USPS) liziko elaziwayo, elizimeleyo likaRhulumente waseUnited States. Lijongene nokubonelela ngenkonzo yeposi kulo lonke elaseMelika, kubandakanya amazwe ahambelana nayo kunye nezinye iindawo ezikude.
Kwakhona, i-United States Postal Service, okanye i-USPS, yinkonzo yokuhambisa eyaziwayo ebonelela ngezisombululo ezininzi zokuhambisa kwi-United States nakwamanye amazwe.
Ngapha koko, yiarhente ezimeleyo eyaziwayo yoRhulumente waseMelika oPhetheyo ukubonelela ngeenkonzo ezingcono zeposi kwilizwe liphela.
Ngoluhlu olubanzi lweenkonzo kunye nokwazi ukuba i-USPS ikwahambisa iipakeji ngeempelaveki, I-USPS ikhule ngokuthandwa kunye namandla fan phakathi kwezithandwayo amashishini eCommerce.
Iinkonzo zayo ziyafumaneka ngaphandle kwendawo. Banikezela ngokuhanjiswa kwangexesha ngexabiso elifanelekileyo kunye nenqanaba eliphezulu lenkonzo elirhwebesha abathengi.
Ngaba i-USPS ihambisa ngeempelaveki?
Xa sisondela kwinkonzo yekhuriya njenge-USPS, omnye wemibuzo yokuqala ethi qatha engqondweni kukuba ingaba bayazisa na ngeempelaveki.
NgeeCawe, kwakhona, azikho kumbuzo kuba zithathwa ngokubanzi njengosuku lokuphumla. Nangona kunjalo, i-USPS ihambisa ngeempelaveki.
Iindidi zeenkonzo zokuHanjiswa eziNikezelwa yi-USPS
Sonke siyazi ukuba i-USPS ihambisa ngeempelaveki, kodwa i-USPS ikwabonelela ngezi imeyile zilandelayo kunye neenkonzo zokuhambisa:
Iphakheji okanye imeyile
Imeyile ephambili $$ Iintsuku ezingama-1 - 3 Iipakethi
Ukubaluleka kweMeyile $$$ Ngokuhlwa okanye iintsuku ezi-1 ukuya kwezi-2 Iipakethi
Imeyile yeendaba $ Iintsuku ezingama-2 - 8 Iipakethi
Indawo yokuThengisa ye-USPS $ Iintsuku ezingama-2 - 8 Iipakethi
Imeyile yokuqala $ Iintsuku ezingama-1 - 3 iposi
1. Imbalelwano ephambili
Ixesha lokuhambisa liqala ukusuka kwi-1 ukuya kwiintsuku ezi-3 kuxhomekeke kwiphakheji, imvelaphi kunye nendawo ekuyiwa kuyo.
Ixabiso eliphambili leMeyile ishenxisa isidingo sokulinganisa iipakeji ezinobunzima obungama-70 lbs. Iindleko ziqala kwi- $ 7.35 kwaye ziyafumaneka kwi-Intanethi nakwiindawo zonke zePosi.
Kwakhona, i-imeyile ePhambili yeyona ndlela ilungileyo ukuba ipakethe okanye iposi yakho inobunzima obungaphezulu ngaphezu kwee-ounces ezili-13 kwaye uyayidinga ngokukhawuleza nangexabiso elifanelekileyo.
Ukuhambisa ngenqanawa kuthatha iintsuku ezi-1 ukuya kwezi-3.
Ukuthathwa kwephakheji simahla, kwaye ukulandela umkhondo kwe-USPS kufakiwe.
Kubandakanya ubuninzi be- $ 50 kwi-inshurensi.
Ukuhanjiswa kwangoMgqibelo kusemgangathweni.
I-imeyile ePhambili: IiRhafu eziPhezulu
Ixabiso lokuhambisa ngenqanawe
12 ½ x 9 ½ intshi $ 6.95 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.35 Imibhalo yesandla yamaxwebhu iileta
Imvulophu yeFreyithi yeeFlethi
12 ½ x 9 ½ intshi $ 6.95 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.35 Iimvulophu ezichazwe kwangaphambili
Imvulophu yeKhadi leZipho
I-intshi ezi-10 x 7 ye-intshi $ 6.95 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.35 Amakhadi ezipho Amakhadi okubulisa agqithisileyo
Imvulophu encinci yeRhafu
I-intshi ezi-10 x 6 ye-intshi $ 6.95 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.35 IiPasipoti amaxwebhu amancinci
Imvulophu yeFlethi esemthethweni
15 x 9 ½ intshi $ 7.25 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.65 Amaxwebhu asemthethweni
Imvulophu yeFlethi ePhantsi
12 ½ x 9 ½ intshi Iposi: $ 8 (kwi-Intanethi kunye neevenkile) Isiseko sentengiso yi- $ 7.55. Iibhokisi zeentsimbi zebhokisi Iimpahla
Ibhokisi encinci yenqanaba elincinci
Ngaphakathi: 8 5/8 x 5 3/8 x 1 5/8 intshi
Ngaphandle: 8 11/16 x 5 7/16 x 1 ¾ intshi $ 7.50 kwiziseko zorhwebo ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) $ 7.90 Iincwadana ezincinci ze-elektroniki
Ibhokisi enkulu yenqanaba leplati
Ngaphakathi: 12 x 12 x 5 ½ intshi
Ngaphandle: 12 ¼ x 12 ¼ x 6 intshi KwiPosi, $ 19.95 (kwi-Intanethi kunye neevenkile) Isiseko sentengiso yi- $ 17.60. Izipho ezinkulu, iikhompyuter, iilaptops, njl.
Ibhokisi yezinga eliphakathi-uhlobo-1 (ukulayisha okuphezulu)
Ngaphakathi: 11 x 8 ½ x 5 ½ intshi
Ngaphandle: 11 ¼ x 8 3/4 x 6 intshi Iposi: $ 14.35 (kwi-Intanethi kunye neevenkile) Isiseko sentengiso yi- $ 12.8. Izinto zeOfisi yezihlangu
Ibhokisi yeqondo eliphakathi eliphakathi-uhlobo 2 (ukulayishwa kwicala)
Ngaphakathi: 13 5/8 x 11 7/8 x 3 3/8 intshi
Ngaphandle: 14 x 12 x 3 ½ intshi I-14.35 yeedola ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) i-12.8 yeedola kwiziseko zorhwebo Izinto zeOfisi yezihlangu
Ibhokisi enkulu yomdlalo webhodi ephezulu
Ngaphakathi: 23 11/16 x 11 ¾ x 3 intshi Ngaphandle: 24 1/16 x 11 7/8 x 3 1/8 intshi KwiPosi, $ 19.95 (kwi-Intanethi kunye neevenkile) Isiseko sentengiso yi- $ 17.60. Imidlalo yebhodi
I zi thintelo:
Ubunzima bephakheji kufuneka bube zii-70 lbs.
Ububanzi obudibeneyo kunye nobude akufuneki ukuba ngaphezu kwe-intshi ezili-108.
Nini Ukutywina ibhokisi yetreyini okanye imvulophuIimpiko zesikhongozeli kufuneka zivale iifolokhwe zesiqhelo.
2. Ukubaluleka kweMeyile ngokuPhambili
Ngaphandle kwemeko ezimbalwa, le yenye yeenkonzo ezikhawulezayo zasekhaya ezinikezelwa yi US Postal Service. Iyafumaneka iintsuku ezingama-365 ngonyaka kwaye ibandakanya isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Kwakhona, ihambisa kuzo zonke iidilesi eMelika, kubandakanya neebhokisi ze-PO. Ixabiso liqala kwi- $ 25.5 kwaye liyafumaneka kuzo zonke iindawo zePosi nakwi-intanethi. Inketho yeFlat Rate isusa isidingo sokulinganisa iipakeji ezinobunzima ukuya kwi-70 lbs.
Ukubeka phambili i-imeyile Express yeyona ndlela ilungileyo ukuba ufuna iphakheji yakho ihanjiswe ngokukhawuleza (ubusuku bonke) kwaye ungakhathali ukuhlawula ipremiyamu.
Iipakeji zithathwa simahla-nokuba kuseofisini yakho okanye ekhayeni lakho.
Kubandakanya umsayino wedijithali werekhodi kunye nokulandela umkhondo kwe-USPS.
Unepolisi yeinshurensi eyi-100.
Ngeeholide nangeeCawa, ukuhanjiswa kobusuku bonke kuyafumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo.
Ukubekwa phambili kweMail Express: IiRhafu eziPhezulu
Imvulophu yexabiso elisemthethweni 15 x 9 ½ intshi I-25.7 yeedola ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) i-22.80 yeedola kwiziseko zorhwebo Amaxwebhu asemthethweni
Imvulophu yeflethi 12 ½ x 9 ½ intshi I-25.5 yeedola ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) i-22.68 yeedola kwiziseko zorhwebo Amaxwebhu eSandla
Imvulophu yeFlethi ePhantsi 12 ½ x 9 ½ intshi I-26.2 yeedola ePosini (kwi-Intanethi kunye neevenkile) i-23.18 yeedola kwiziseko zorhwebo Iimpahla zeBoxed jewelry
3. Imeyile yokuQala yeKlasi
Imeyile yokuQala yokuQala yenye yeenkonzo ze-USPS zexabiso eliphantsi. Yindlela ebiza indleko nesebenzayo yokuthumela iiphakheji ezincinci kunye neemvulophu.
kwakhona, Imeyile yokuQala yokuPosa iiTampu, kwelinye icala, okwangoku zixabiso nge-1 oz. Nangona kunjalo, aziphelelwa lixa amaxabiso abo enyukile.
Ukuba ipakethe yakho okanye i-imeyile inobunzima be-ounces ezili-13 okanye ngaphantsi kwaye awuyidingi ukuhanjiswa ngobusuku, i-First Class Mail yeyona ndlela ilungileyo.
Iimvulophu ezinobungakanani obulinganayo obunobunzima obufikelela kwi-3.5 oz.
Iiphakheji ezincinci ezinobunzima ukuya kuthi ga kwi-13 oz.
Izakuhambisa iphakheji ngeentsuku ezintathu zomsebenzi. Iindleko ziqala kwi- $ 0.55.
Umgama awunampembelelo kumaxabiso.
Akukho zibonelelo zokuhanjiswa kwekhaya okanye ukongezwa kwezibaso.
Kwiiphakheji ezincinci, olu lukhetho olukhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi.
Ihanjiswe ngeentsuku eziyi-1 ukuya kwezi-3 zeshishini
$ 5000 kwi-inshurensi yokugubungela (ukuthengisa kuphela)
13 oz. ubuninzi
Ngamakhadi kunye neeleta, ukuya kuthi ga kwi-3.5 ii-ounces zobunzima bephakheji simahla.
Izitampu ezinobungakanani obuqhelekileyo ziqala kwi- $ 0.35 yekhadi leposi elixande.
Izitampu zeeleta ziyafuneka kwiiposikhadi ezingaphezulu. Baqala ngexabiso le- $ 0.55.
Izitampu ezinobungakanani obuqhelekileyo ziqala kwi- $ 0.55 kwimvulophu yoxande.
Izitampu zemvulophu ezinemilo engaqhelekanga, ezinje ngezikwere ezigqithileyo, ziqala nge $ 0.70.
Iileta zodidi lokuqala kufuneka zingabinobunzima obungaphezulu kwe-3.5 oz.
Iiphakheji ezinkulu zeposi yodidi lokuqala kunye neemvulophu akufuneki zibenobunzima obungaphezulu kwe-13 oz.
Zonke iimvulophu kunye neeposikhadi kufuneka zibe yimilo yoxande. Ngaphandle koko, kunokuhlawulwa imali eyongezelelweyo.
4. Imeyile yemidiya
Oku kufumaneka kuphela kwiividiyo, iincwadi, iirekhodi kunye neeCD. Nangona kunjalo, kukho umda othile kwiMedia Mail. Into inokubekwa kwimvulophu emnandi, edibeneyo, kodwa hayi kwimvulophu eqhelekileyo, ecacileyo enezinto ezongeziweyo.
Incwadi ayinakuba bubble isongelwe kwimvulophu ye-manila. Ukuba usebenzisa ibhokisi, kufanele ukuba ibe neencwadi ngaphandle kokongeza.
Awuvumelekanga ukuba uthumele nantoni na eneentengiso kuyo (umz. Iimagazini namaphephandaba). Zonke iiphakheji zeMedia Media ziphantsi kovavanyo.
Oku kuthetha ukuba I-USPS inegunya elipheleleyo lokuyivula nokuyihlola. Ukuba uthumela iimagazini okanye amaphepha-ndaba ngeMedia Mail, aya kubuyiselwa nesaziso esithunyelwe ngeposi.
Imeyile yeMedia lukhetho olunamaxabiso aphantsi lwezixhobo zemfundo, kodwa lunokucotha ngenxa yomgaqo-nkqubo we-USPS "weSithuba esiFumanekayo".
Oku kuthetha ukuba zonke ezinye iintlobo zeposi zithuthwa kuqala, kwaye iiMeyile zeMedia zivunyelwe kuphela ukuba kukho isithuba. Ukuba akukho ndawo yaneleyo, iphakheji kuya kufuneka ilinde.
Imeyile yeMedia ilungele ukuthumela izixhobo zemfundo ezinje ngeencwadi kunye neeDVD ngamaxabiso aphantsi okuhambisa ngenisa kancinci. Iposi yeofisi ihlawulisa ixabiso lokuqala le- $ 2.75.
Eyona ndlela inexabiso eliphantsi kuyo nayiphi na into enobunzima obungaphezulu kwe-ounces ezili-13.
Kwakhona, ubunzima bepakethi ephezulu zii-70 lbs.
Ixabiso limiselwa ngokobunzima kunokubona umgama.
Ihanjiswe ngeentsuku eziyi-2 ukuya kwezi-8 zeshishini
Yintoni ongayithumela ngeMedia Mail?
Izixhobo zovavanyo kunye nomculo oprintiweyo
Iitshathi zemfundo eziprintiweyo
Imidiya enokufundwa yikhompyuter
Ukurekhodwa kwesandi nevidiyo
Iincwadi zezifundo (ubuncinci amaphepha ayi-8)
Amaphepha ogqirha agqithisileyo kunye nezibopheleli
Ukuqhuba kweekhompyuter, ukuqhuba kwidijithali, kunye nemidlalo yevidiyo ayifanelekanga kwi-Media Mail.
5. Indawo yokuThengisa yase-USPS
Olu khetho lubiza iindleko kwaye luthembakele lokuthumela emhlabeni kwiiphakheji ezingaphezulu. Kuyanceda ukuba iphakheji yakho ayifuni ukuhanjiswa kwangoko. Iyafumaneka ngokuhanjiswa okunobunzima obungaphaya kweepawundi ezingama-70.
Ukuba iphakheji ayihlangabezani neemfuno zePosi ePhambili kwaye "ingaphezulu," jonga iklasi yeposi yeRetail Ground.
Iipakethi zinobunzima obufikelela kuma-70 eepawundi kunye nokulinganisa ukuya kuthi ga kwii-intshi ezingama-130 ubude nobubanzi.
Ukulandelelwa kwe-USPS kunikezelwa ngaphandle kweendleko.
Ithatha iintsuku zomsebenzi ezi-2 ukuya kwezi-8 ukuzisa.
Ifumaneka kuphela kwii-ofisi zeposi ze-USPS.
Iiphakheji ezigqwesileyo ezithathwa njengezinkulu kakhulu ukuhanjiswa kwePosi ePhambili kunye nePrayority Express Express.
Ifumaneka kuphela ukuhanjiswa okunobunzima obufikelela kwi-70 yeepawundi kunye nokulinganisa ukuya kuthi ga kwi-intshi ezingama-130 (ubude & girth zidityanisiwe).
Ixabiso elingaphezulu lisebenza kwiiphakheji ezilula, ezinkulu.
Ngaba i-USPS ihambisa ngeCawa?
Ewe. I-USPS ihambisa ngeeCawe, kodwa ihlala kuphela ziPakeji zePosi eziPhambili kunye neephakeji zeAmazon. Ukuhanjiswa kwangeCawa phantse kube yinto engenakuthintelwa ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezikhulayo zabathengi.
Yintoni indleko zokuhanjiswa ngoMgqibelo nangeCawa?
Ukuba ujonga amaxabiso, uyakuqaphela oko Ukuhanjiswa kwangoMgqibelo nangeCawa ayongezi. Oku kungenxa yokuba ezi nkonzo zibandakanyiwe neenkonzo ze-USPS.
Ixabiso, njengayo nayiphi na inkonzo yokuhambisa, ixhomekeke ngokupheleleyo kwizinto ezinje ngomgama ohanjiweyo, inkonzo yokuhambisa ekhethiweyo, ubunzima kunye nobukhulu beephakeji, njalo njalo. Nantsi into onokuyilindela ukuhlawula ukuhanjiswa ngoMgqibelo nangeCawa.
Imeyile ephambili Amaxabiso aqala kwi- $ 6.40; ukuhanjiswa kwexabiso eliphantsi ukuya kuthi ga kwi-70 lbs; ukuhanjiswa simahla ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo; Ukuhanjiswa kuthatha iintsuku zomsebenzi ezi-1-3.
Ukubaluleka kweMeyile Amaxabiso aqala kwi- $ 22.95; ukuhanjiswa kwexabiso eliphantsi ukuya kuthi ga kwi-70 lbs; ukuhanjiswa simahla unyaka wonke; ukuhanjiswa kulindeleke ngaphakathi kweentsuku eziyi-1-2 zokusebenza
Yintoni iYure yokuHanjiswa kweUSPS ngoMgqibelo?
Ixesha lokuhanjiswa kwe-USPS ngeMigqibelo limiselwe zizinto ezininzi, kubandakanya:
Isixa seposi esifunyenweyo
Kwakhona, umgama ukusuka kwindawo yokugcina izinto ukuya kwindawo yokugqibela.
Akukho mahluko phakathi ko-Mgqibelo nangawo nawuphi na omnye umhla kubaphathi beeleta. Umntu ophethe ileta akayeki ukuyeka indlela yakhe. Kuya kufuneka bazalisekise zonke izibophelelo zabo.
Ukuba inani lee-imeyile ezithunyelwayo liphantsi, banokufika kwakamsinya kunokuba bekulindelwe. Nangona kunjalo, ukuba banenani elikhulu leeposi, amaxesha okuhanjiswa kwe-USPS anokwandiswa.
Ukuhanjiswa kweeyure ze-USPS ngoMgqibelo nangeCawa
Usenokuzibuza malunga nexesha lokuhanjiswa ngoku ukuba uyazi ukuba i-USPS ihambisa ngeempelaveki. Ixesha lokuhambisa lonikezelo lwakho lwangoMgqibelo luxhomekeke kwinkonzo yeposi oyikhethileyo kunye nendawo okuyo ngqo.
Kuya kufuneka ukhethe Ukubaluleka kweMeyile ngokubaluleka okanye kwi-Mai ephambilil ukuba ufuna ukuba iphakheji ifike ngeMigqibelo. Ngokubanzi, Iiyure zokuhanjiswa kweempelaveki ze-USPS zimiselwa yiposi yendawo.
Ngaphandle kwento yokuba uninzi lweeposi lubeke iiyure zokusebenza, abathengi banokusebenzisa i-kiosk ngalo naliphi na ixesha. Ngenxa yoko, uninzi lohambiso lwangoMgqibelo luchongwa yindawo okuyo, kwaye kwakhona, iiyure zokusebenza zeposi yakho yendawo.
Nangona kunjalo, unokulindela ukuhanjiswa ngentsasa elandelayo.
Ukuhanjiswa kweCawa kuyafumaneka, kodwa kunqunyelwe, njengokuhanjiswa kwangoMgqibelo. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuya kuhanjiswa kuphela iipakeji ze-imeyile eziphambili kunye neAmazon.
Ixesha lokuhanjiswa lixhomekeke ngokupheleleyo kwixesha leposi yengingqi. Umzekelo, i-USPS ihambisa phakathi kwe-9 kusasa kunye ne-1 emva kwemini e-Aurora, eColorado, ngelixa i-USPS ihambisa phakathi kwe-11 kusasa kunye ne-3 emva kwemini kwezinye iindawo zaseColorado.
Iinkonzo zokuhambisa ze-USPS- amaxabiso kunye namaxesha alindelweyo okuHanjiswa
Le tafile iya kukubonelela ngolwazi oluneenkcukacha malunga neenkonzo ze-USPS kunye neentsuku zokuhanjiswa, kubandakanya ukuba i-USPS ihambisa ngeempelaveki, iintlawulo, njalo njalo.
Imeyile yokuQala yokuQala
Indawo yokuThengisa ye-USPS (iPost Standard)
1-2 iintsuku zeshishini ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali 1-3 iintsuku zeshishini, kodwa ayisosiqinisekiso 1-3 iintsuku zeshishini, kodwa akuqinisekiswanga 2-8 iintsuku zeshishini, kodwa akuqinisekiswanga 2-8 iintsuku zeshishini, kodwa akuqinisekiswanga
Iintsuku zokuhanjiswa kwe-USPS
Iintsuku ezingama-365 ngonyaka, ukuhanjiswa kweSat kunye nelanga kubandakanya NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo (ngaphandle kweeholide) Ayichazwanga ngqo Ayichazwanga ngqo Ayichazwanga ngqo
Uqala $22.95 kwiindawo zeposi okanye kwi-intanethi kulo naliphi na ilizwe; ireyithi ethe tyaba ukuya kuthi ga 70 lbs Uqala $6.45 kwiindawo zeposi okanye kwi-intanethi; ireyithi ethe tyaba ukuya kuthi ga 70 lbs Amaxabiso axhomekeke kubungakanani beposi / bephakheji, ubunzima kunye nemilo Uqala $6.75 eposini Uqala $2.72 eposini
-Isi $100 inshorensi
-ukubandakanywa kweerekhodi zokutyikitya ubungqina kunye nolwazi lokulandela umkhondo
-Ukuhanjiswa ngobusuku, okufikelela kusuku olulandelayo nge-10: 30 kusasa, ukuhanjiswa kweholide kunye neCawa kuyafumaneka
-kubandakanya ukulandela umkhondo kwe-USPS kokubini ukuthengisa kunye nokuthumela kwi-Intanethi
I-inshurensi eyi- $ 50
-Akukho ntlawulo yepetroli, okanye yasemaphandleni, yokuhlala, kunye nokuhanjiswa rhoqo kwangoMgqibelo
Inkonzo enexabiso eliphezulu 13 oz Ngeposi
-$5,000 Ixabiso lentengiso ligutyungelwe yi-inshurensi. Oku kungadityaniswa nezinye iinkonzo zokuqinisekisa ukuhanjiswa
-olukhetho olufanelekileyo kumashishini
ifumaneka kuphela kwivenkile
-khetha iipakeji ezinkulu ezingenakulungiswa kwi-imeyile engaphambili ye-imeyile kunye ne-imeyile ephambili
-kunye USPS yokulandelela
-indlela esebenzayo yokuthumela izixhobo zemfundo ezinjengeencwadi
-70lbs ubunzima obukhulu
Imvulophu evulekileyo enexabiso eliphantsi ~ Ubunzima obukhulu kuphela 13 oz
Iimvulophu kunye neeposikhadi kufuneka zibe luxande. Ngenye indlela, kungongezwa intlawulo engaphezulu
inokusetyenziselwa kuphela ukuthunyelwa okunobunzima obufikelela kwi-70 lbs kunye 130 intshi (omabini ubude kunye negalaji edibeneyo)
-Kukho amaxabiso akhethekileyo kwiiphakheji ezinkulu nezisindayo
Ubunzima obukhulu kuma-70 lbs
-kukho izithintelo kwiindidi zemidiya ezinokuthunyelwa njengoko zibandakanya kuphela izinto zokufunda (imidlalo yevidiyo, ukuqhuba kwidijithali, ii-drive zekhompyuter azikulungelanga ukuthunyelwa ngamaxabiso eMedia Mail).
Ungazithatha iipakeji ze-USPS ngoMgqibelo nangeCawa?
Abathengi banokukhetha kwiinkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa yi-USPS. Ngelixa i-USPS ihambisa ngeempelaveki, ikwabonelela ngeendlela zokukhetha iipakethe kwabo banesizathu esivakalayo sokwenza njalo.
Unokukhetha iipakeji ukusuka Iiofisi ze-USPS ukuba unolwazi lokulandela umkhondo kunye nezinto ezimbalwa, ezinje ngokuba ufuna ukuba iphakheji ifike kwangoko okanye ukuba ucele ukubanjwa kwesicelo kwi-USPS.
Iinyani malunga ne-USPS yokuthabatha iphakheji
Ngenxa yokuba luxanduva lwe-USPS ukuhambisa iipakeji kunye neposi ngexesha kwiindawo ezijolise kuzo, kukho amaxesha apho abathengi banokuzifuna ngaphambi komhla okanye ixesha elicwangcisiweyo lokuhanjiswa.
Ukuba unenombolo yokulandela umkhondo kunye nokulandelayo, unokukhetha iphakheji kwi-USPS.
1. Isidingo singxamisekile
Unokuqhagamshelana nenkonzo yabathengi ye-USPS ngoncedo ukuba unemeko ekhawulezileyo engenakuhoywa (umzekelo, ushiya isixeko) kwaye ufuna iposi okanye iphakheji ngokukhawuleza.
Abathengi banokuzithatha iipakethi okanye i-imeyile kwezinye iimeko, kodwa kuphela xa isizathu sisemthethweni. Kungathatha iintsuku ukuba abathwali bafike ekhayeni lakho.
Kungoko ke kukhethwa ukuba urhoxise ukusiwa ekhaya uze uyothatha iphakheji eposini ngaloo maxesha.
2. I-USPS ephosiweyo
Ukuba ukhethe ukuhanjiswa kwekhaya, kunokwenzeka ukuba uya kucelwa ukuba usayine xa iphakheji ifika. Ukuba oku akunjalo, unokuhambisa ipakethe yakho xa ungafumaneki.
Nangona kunjalo, inkwenkwe ehambisa okanye iposi iya kucela ugunyaziso kulowo wamkelayo, osele utyikitye, okanye mhlawumbi ugunyaziso lwangaphambili oluvela kwiofisi kwezinye iimeko.
Ukuba imeko ayihambelani nakwesinye seziganeko ezibini zokuqala, umntu ophetheyo angabuyisa iphakheji yakho okanye ayishiye kwiposi ekufuphi.
Banokukuvumela ukuba uthathe iphakheji ngelo xesha ukuba uzisa isiliphu sakho kunye nekhadi lokuchonga elisemthethweni okanye i-ID ngezizathu zokhuseleko.
3. Bambelela kwisicelo
Inkqubo ye-USPS Package Intercept inomsebenzi obizwa ngokuba yi-Hold upon Request eyenzelwe ngokukodwa abantu abafuna ukuthatha iphakheji yabo kwelinye icala.
Oku kuthetha ukuba ungumthumeli, kwaye ipakethe yakho ilahlekile, okanye into yakho ayikakhululwa okanye ihanjiswe, kwaye uyayifuna.
Kuya kufuneka wenze isicelo solu hlobo lwezibonelelo kunye nedilesi yomthumeli ebandakanyiweyo ngala maxesha. Kukho intlawulo ekufuneka ihlawulwe. Nceda ugcine engqondweni ukuba le ntlawulo ayibuyiswa.
Iingcebiso kwiiphakheji ze-USPS
Ke, kuthekani ngokuphepha eminye imicimbi ngokuthunyelwa kwakho? Ewe, inokukwazi ukukusindisa kwezi ntloko zikhankanyiweyo ngentla.
Ezo, ewe, azinakuthintelwa, ngakumbi kwimeko kaxakeka. Nangona kunjalo, ukuba unomthengi onetyhefu, nazi ezinye zeengcebiso zokukugcina unemicimbi yokuposa.
Unokucwangcisa iveni, uthathe iposi yakho ePosini, uyishiye kwibhokisi yakho yeposi, okanye uyilahle kwibhokisi yokuqokelela eluhlaza.
Ukuba into yakho inobunzima obungaphezulu kwe-ounces ezili-13, yise kwikhawuntara yevenkile yasePosini. Qiniseka ukuba izitampu zakho zeposi zikhona.
Ukucwangcisa iveni, qala ngokungenisa isicelo sakho kwi-Intanethi kwaye ulungiselele izinto zakho ngaphambi kokuba kufike umphathi.
Gcwalisa ifom yokubamba iposi kwiPosi kuqala ngaphambi kokuba ubambe iposi yakho. Khumbula ukutyelela i-USPS kwi-intanethi okanye utsalele iinkonzo zabathengi ngolwazi oluthe kratya lokuba into yakho igcinwe iintsuku ezingama-30 yinkonzo yeposi. Ungayithatha iposi yakho ePosini okanye uyihambise ekhayeni lakho.
Iingcebiso ezingakumbi kwiiphakheji ze-USPS
Khumbula ukuba Hlaziya idilesi yakho yokuhambisa ngalo lonke ixesha uya kutshintshela ekhaya ukuba uhlala usendleleni.
Xa kuziwa ekushicileleni izitampu zokuposa, unokwenza ngokukhawuleza nangokulula kwi-Intanethi, ususe isidingo sokuya eposini.
Utyikityo lwakho lubalulekile kwimbalelwano yakho. Utyikityo lwakho luyavuma ukuba uzifumene izinto. Gcina ukhumbula ukuba xa usenza oku, inkonzo yeposi ikukhulula kwityala lakho. Ngezizathu zokhuseleko, kuya kufuneka qinisekisa ulwazi lomthumeli, njengegama nedilesi, xa uyifumana.
Siyathemba ukuba ulithandile eli nqaku Ngaba i-USPS ihambisa ngeempelaveki kwaye iluncedo kuwe kwaye wakwazi ukuphendula umbuzo wakho ukuba i-USPS ihambisa ngeempelaveki.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso malunga ne-USPS kwaye ukuba bayazihambisa ngeempelaveki, nceda wenze kakuhle ushiye uluvo kwaye, wabelane ngeli nqaku kunye nabahlobo bakho.
tags:Ngaba ukuthumela imeyile kuza ngecawe, Ngaba i-usps ihambisa ngomgqibelo nangecawe, Ngaba i-usps ihambisa ngecawa yowama-2021, Ngaba i-usps ihambisa ngecawa ze-2020, Ukuhanjiswa kweposi ngomgqibelo, iposi ephambili yeposi, ithathwa nini iposi ngomgqibelo kwindawo yam, isps ihambisa nini
Omkhulu umboniso 2021: Amaxabiso, iiyure zeSalon, iiNkonzo kunye neMveliso ethengisiweyo
Ixabiso eliphezulu lezahlulo 2021 zohlaziyo: Izibonelelo kunye nokuwa okunokubakho
Ukutya kwaseThai kufutshane nam okubonelela ngeyona Cuisine intle yaseThailand